Home News Yoweeri Museveni oo fariin adag u diray Madaxda Soomaaliya
Yoweeri Museveni oo fariin adag u diray Madaxda Soomaaliya
Madaxweynaha dalka Uganda oo ka hadlayay Kulan ka dhacay Magaalada Kampala ee Caasimadda dalka Uganda ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo dhiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si looga maarmo ciidanka AMISOM.
Madaxweynaha Uganda ayaa sidoo kale xusay in dalalka Caalamka laga rabo in ay taageeradda ay siiyaan Ciidanka AMISOM in loo wareejiyo dhismaha Ciidanka Soomaaliya si ay dalka ula wareegaan.
Madaxweynaha Uganda, Yoweeri Museveni Waxaa uu xusay in Mas’uuliyiinta Soomaalida iyo Caalamka ay laga rabo dadaal badan oo ku aadan tayeynta Hay’addaha kala duwan ee Ammaanka Soomaaliya.
Hadalkaan ayuu ka sheegay Madaxweynaha dalka Uganda, Yoweeri Museveni ka dib markii uu Aqalka Madaxtooyadda ee Entebbe kula kulmay Wafdi ka socday Dowladda Maraykanka oo ay hoggaaminaysay Kaaliyaha cusub ee Xoghayaha Arrimaha Dibedda Maraykanka u qaabilsan Arrimaha Bariga Afrika, Ambassador Makila James.
Previous articleMagaalada Muqdisho oo laga xusayo Munaasabada sanadguuradii 75-aad ee ka soo wareegtay aas aaskii ciidanka Booliska Soomaaliyeed
Next articleimisa ayey Dowladda Federaalka Soomaaliya ku bixisay si loo doorto Lafta Gareen
[XOG] Muse Biixi oo la soo hordhigay heshiiska Dekedda Saylac ee Farmaajo u saxiixay Itoobiya
[Deg Deg] Dhimasho & dhaawac ka dhashay qarax ka dhacay duleedka Beledweyne
Sharif Xasan oo ku biiray ololaha doorashada Saciid Deni, Maxaa isbadalay?
Ciidamada Dowladda Iyo Kuwa Amisom Oo Howlgalo Ay Kasameeyeen Magaalada Marka...
Boosaaso oo ka go’day Magaalooyinka kale ee Puntland